Maxay tahay sababta keentay in Katrina kaif Jagadeedii Ambassador-ka L'Oreal Lagu Badalo Deepika padukone
Maxay tahay sababta keentay in Katrina kaif Jagadeedii Ambassador-ka L’Oreal Lagu Badalo Deepika padukone
March 21, 2017 No Comments News, Somali 1,065 views
Mar haddaad Ambassador u tahay mid kamid ah shirkaddaha ugu weyn ee alaabaha la isku qurxiyo soo saara gaar haba u badnaadeen dhanka dumarka waxay kamicno tahay arintaa inaad hawl culus xambaarsantahay aadna Magac weyn ku helaysid. Shirkaddaan waxaa Ambassador u ahaa Katrina kaif balse arintaas waxay u muuqataa in ay ku garaacday hawshaas Deepika Padukone oo ay aad u tartamaan wayna kala wareegtay jagadaas sida laga soo xiganayo ilo lagu kalsoonyahay. Haddaba sidee ku dhacday in Deepika jagadaas hesho iyaddoo horey loo sheegay in Deepika ay horey ugu dadaaleysay helidda booskaas qaaliga ah, dhanka kalena warbixino ayaa sheegayay in Katrina iyaduna ay damacsaneed inay yagleesho Shirkad cusub oo alaabaha la isku qurxiyo soo saadha taaso ka dhigan inay tartami doonaan shirkadda ay Ambassador-ka u tahay. Xan ayaa lagu sheegay in ay arintaan ay booskeedda ku wayday Katrina ay tahay In Shirkadda u cuntami wayday Wada shaqeyn la’aanta Katrina iyo Weliba iyaddoo meeshi laga filayay aan kaso bixin waxayna kaliftay in Heshiiska aan loo cusboonaysiin kadib markuu dhacay.
Deepika Padukone oo muddooyinkii u danbeysay ku gudda jidhay Dhanka Hollywood siday ula qabsan laheed oo shacbiyad balaaran uga heli lahayd ayaa waxaa la sheegay in sababta koowaad ee ugu wayn oo ay jagadaan u xiiseynayso ay tahay In ay ka caawin kadho shirkadaan siday shacbiyad iyo awwood ugu dhex yeelan lahayd Hollywood-ka ayna u balaarin laheyd Saameeynteeda.
Katrina Iyadduba qorshe la’aan ugama gaabin hawshaan Ee waxaa u qorsheysnaa ayaa la leeyahay inay shirkad u gooniya furato maadaama aktarad lawada jecelyahay ah, shirkadaasoo la leeyahay waxay ka hor imaanaysaa rabitaan L’Oreal oo ay Ambassador u aheyd.
Waan ogaan doonaa meesha ay ku danbeyso arintaan F4U kala soco waxii soo kordha.
Deepika Padukone Katrina Kaif L'Oreal
SAWIRO+WARBIXIN: Atiriisho Katrina Kaif oo soo booqatay mataanaha Karan Johar ee “Yash” iyo “Johi”